7 Iidyunivesithi ezigqwesileyo zamaKristu eCanada 2022
7 Iidyunivesithi ezigqwesileyo zamaKristu eCanada
Ngaba uyazi ukuba kukho iiyunivesithi zamaKristu eCanada? Ndixoxe ngezona yunivesithi zi-7 zibalaseleyo zamaKristu eziseCanada ngokungacwangciswanga.
ICanada lelinye lamazwe akwilizwekazi “kuMntla Melika”. Inamaphondo alishumi kunye nemimandla emithathu esuka kwiAtlantiki ukuya kwiPasifiki ukuya emantla kuLwandlekazi lweArctic, egubungela i-9.98 yezigidi zeekhilomitha zeekhilomitha. Oku kwenza iKhanada ibe lilizwe lesibini ngobukhulu emhlabeni xa iyonke.
Kwimephu yejografi yehlabathi, imida esemazantsi nasentshona yeCanada ne-United States, yolula iikhilomitha ezingama-8,891 (5,525 mi). Kwaye, ngowona mda womhlaba omde wezizwe ezimbini. Ikomkhulu laseCanada yiOttawa, kwaye iindawo zayo ezintathu ezinkulu zedolophu yiToronto, Montreal, kunye neVancouver.
Izixeko ezikhulu zaseKhanada zaziwa njengamakhaya kumaqela athile adumileyo afana neToronto Maple Leafs, iCalgary Flames, iMontreal Canadiens, kunye neVancouver Canucks.
Zingaphezulu kwamashumi amane (40) iiyunivesithi zamaKristu eziseCanada kwaye zibonelela ngeedigri, iidiploma, kunye nezatifikethi. Ezi zikolo zobuKristu ziyahluka ngobukhulu namandla azo amanani ukusuka kwishumi elinesibini labafundi ukuya kumawaka ambalwa.
Ngaphandle kwezifundo zenkolo nezakwalizwi, ezi zikolo zibonelela ngezobugcisa, isayensi, ishishini, kunye neenkqubo zangaphambi kobuchwephesha, kunye nezidanga.
Ngaba zikho iiDyunivesithi zamaKristu eCanada?
Iimfuno zokufaka isicelo kwiYunivesithi yamaKristu eCanada
Dyunivesithi yase Crandall
IYunivesithi yaseTrinity yaseNtshona | Langley, BC
Ikholeji yeYunivesithi yaseTyndale
Ii-FAQs Kwezona Yunivesithi ziBalaseleyo zobuKristu ezisi-7 eCanada
Imbali ibonisa ukuba kwiinkulungwane ezininzi ezadlulayo, zazimbalwa iiyunivesithi zamaKristu eKhanada. Kutshanje, kuye kwarekhodwa ukuba zininzi iiyunivesithi zamaKristu eCanada. Ke, kukho iiyunivesithi zamaKristu eCanada ngoku.
Njengayo nayiphi na enye ikholeji, iyunivesithi yobuKristu ineemfuno zayo eziya kufumana umfundi (oko kukuthi, umenzi-sicelo) amkelwe kuyo nayiphi na kuzo.
Ezo mfuno ziquka:
Ifomu yesicelo (enomrhumo ongabuyiswayo wesicelo);
Umbhalo osemthethweni (kubandakanywa isikolo esiphakamileyo esilingana ne-OSSR);
Ifoto yomenzi-sicelo (encanyathiselwa kwifom yesicelo);
Iimbekiselo ezimbini zobuqu. Omnye uvela kumfundisi (oneleta yecawa) kunye nomnye ophuma kumntu ongesiso isalamane esidume kakuhle.
Isishwankathelo esifutshane sobungqina bakho bobuqu. (umhlathi o-1) kunye
Uvavanyo lokubeka isiNgesi.
Emva kokungenisa iimfuno, iBhunga lezeMfundo liya kuphonononga ifayile yomfaki-sicelo. Ukuba umenzi-sicelo wamkelwa, ileta yokwamkelwa iya kulandela.
Uluhlu lwezona yunivesithi zi-7 zibalaseleyo zamaKristu eCanada ziquka:
IKholeji yoKhululo yeYunivesithi
KwiZiqu zithathu kwiYunivesithi yaseNtshona
IYunivesithi yaseAmbrose yenye abucala Iyunivesithi yobugcisa be-liberal leyo ibekwe ngaphakathi ICalgary, Alberta, Khanada, kwaye inamaqela ayo asebenzisa amahlelo asuka kwiManyano yobuKrestu kunye neMissionary kunye neCawe yaseNazarene eKhanada.
Kukho abafundi abangaphezu kwama-850 kule yunivesithi yamaKristu eCanada.
IYunivesithi yaseAmbrose yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu eCanada ene-16-hektare yomhlaba equlethe iindawo zokuhlala zabafundi, amathala eencwadi, iindawo zokuzilolonga kunye namaziko emfundo.
Yeyona yunivesithi igqwesileyo yobuKristu eCanada ebonelela ngesidanga sobugcisa esinezifundo eziphambili kubandakanya ipsychology, ishishini, izifundo zobuKristu, uncwadi lwesiNgesi, imbali, kunye nomculo, kunye ne-bachelor yesayensi kwibhayoloji, isidanga solawulo lweshishini, a. I-bachelor yemfundo kunye nee-bachelor's kunye nezidanga ze-master.
Yeyona yunivesithi ibalaseleyo yamaKristu eCanada ekwiWinnipeg, Manitoba, Canada. Awona mahlelo aphambili afunda kule yunivesithi yamaKristu eCanada ngamaMennonite aseCanada kunye namaMennonite Brethren. Le yenye yeeyunivesithi zamaKristu ezinabafundi abangaphezu kwe-1,666 abanemali yokufunda ye-7,600 yeedola.
Ikhampasi yaseCMU yaseShaftesbury ibonelela ngezidanga ezintlanu zesidanga kwisayensi, ulawulo lweshishini, umculo, unyango lomculo, kunye nobugcisa-emva ibonelela nge-19 majors-kunye nezidanga zezakwalizwi, ubulungiseleli, ukwakha uxolo, kunye nophuhliso lwentsebenziswano, kunye neMBA.
I-CMU yenye yeeyunivesithi zamaKristu eCanada ezineenkqubo zazo ezibonelela ngentsebenziswano phakathi kweenkalo ezahlukeneyo nokufunda ngamava. Umlinganiselo we-faculty wabafundi we-18 ukuya ku-1 unika abafundi uqhagamshelwano olusemgangathweni kunye neeprofesa zabo. I-CMU isebenza kwiKholeji ye-Menno Simons (ehambelana neYunivesithi yaseWinnipeg), kunye nenkqubo ye-Outtatown, ethatha abafundi ekufundeni kunye nohambo lwenkonzo kwihlabathi jikelele.
IYunivesithi yaseCrandall ngumKristu omncinci ubugcisa bobukhulu eyunivesithi ekhoyo eMoncton, ENew Brunswick, Khanada. Crandall iqhutywa yi AmaBhaptizi aseKhanada aseAtlantiki eCanada. Le yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu eCanada enabafundi abangaphezu kwe-800 ngefizi yokufunda eyi- $ 10,785.
IYunivesithi yaseCrandall yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu eCanada ezinekhampasi ebonelela ngamagumbi okufundela ale mihla, indawo yemidlalo, kunye negumbi lokuhlala, ecaleni kwendawo yokuhlala yesintu.
Le yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu eCanada ezinezifundo ezibandakanya izidanga ze-bachelor kubugcisa, isayensi, ishishini, imfundo, ulawulo lombutho, kunye nezakwalizwi, kunye neenkqubo ezintathu zeenkosi.
Ikwathatha i-kinesiology njengeyona nto iphambili. Eyona nto iphambili yinkqubo yonyaka enika abafundi ithuba lokufunda phesheya. Apha, abafundi banokumela iCrandall Charger kwelinye lamaqela alithoba ezemidlalo.
Bona le link ngolwazi oluthe kratya
Yenye yeeyunivesithi zamaKristu eCanada ezinze e-Edmonton.
Le yenye yeeyunivesithi zamaKristu eCanada ezibandakanya iimvaba ngeemvaba. Le yenye yeeyunivesithi zamaKristu ezinabafundi abangaphezu kwe-910 abanemali yokufunda ye-13,082 yeedola.
IYunivesithi yaseKing yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu eCanada ezibonelela nge-15 majors, kubandakanya nezifundo zokusingqongileyo, isayensi yezifundo ezahlukeneyo, kunye nekhemistri, kunye nesatifikethi, idiploma, kunye neenkqubo zasemva kwesidanga. Iinkqubo zibonelela ngamathuba ophando lwabangekathweswa isidanga, ukubandakanyeka koluntu, ukuqeqeshwa, kunye nokufunda phesheya.
I-King's likhaya le-Leder School of Business, i-Micah Centre ye-Social Justice, kunye neZiko le-King's Visualization in Science. Amaqela e-Eagles Athletics akhuphisana kwiNkomfa yeeMbaleki zeeKholeji zaseAlberta kwibasketball, ivolleyball, ekhatywayo, kwi-futsal, nakwi-badminton.
5. IKholeji yeYunivesithi yaseMhlengi
IYunivesithi yaseRedeemer yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zesidanga samaKristu ezibonelela ngeenkqubo ezikhokelela kwiSidanga soBugcisa, isiDanga seSayensi, isiDanga soLawulo lweShishini, kunye nesidanga seMfundo. Ukusuka kwikhampasi yayo yase-Hamilton, e-Ontario, uMhlengi ulungiselele ukuphumelela iiklasi - isizukulwana esilandelayo seenkokeli zamaKristu - phantse iminyaka engama-40. Abafundi abaKhululwa baxonxwa kukuzinikela koHlaziyo lobuKristu ukubona ukholo olulukiweyo kuzo zonke iinkalo zokufunda nobomi.
IYunivesithi yaseTrinity yaseNtshona (TWU) yi abucala UmKristu ubugcisa bobukhulu yunivesithi Langley, eBritish Columbia, Khanada. Lilungu le IYunivesithi Canada.
Yasekwa ngo-1962, ibhalisa malunga nama-4,000 abafundi kwaye ihlala kwindawo yasemaphandleni eyi-157-acre (64 ha) I campus kufutshane nelali yembali Fort Langley, British Columbia. I-Trinity Western yeyona yunivesithi inkulu yaseCanada exhaswa ngemali yabucala.
Inobugcisa obunenkululeko ebanzi, isayensi, yaye izifundo zobungcali ikharityhulamu, enikezela ngama-45 igraduate majors Kunye ne17 isidanga kunye nesidanga iinkqubo. Inomlinganiselo womfundi ukuya kwi-faculty we-16: 1 kunye nobukhulu beklasi bonyaka wokuqala we-37 kunye ne-avareji yobukhulu beklasi ye-15.
UTrinity Western ulilungu le Umbutho wasebukhosini waseCanada.
Amaqela ayo evarsity, aziwa ngokuba yi Abantu baseSpartan, ngamalungu e U Ezemidlalo.
Ikholeji yaseTyndale yeyunivesithi yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu eCanada kwaye iseToronto. Inenani labafundi abangaphezu kwe-1,600 kuyo.
Ikholeji yaseTyndale yaseyunivesithi yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zamaKristu eCanada ezivuleleke kubo bonke abafundi, nokuba bathini na.
UTyndale utsala abafundi abavela ehlabathini lonke abamele iintlanga ezahlukeneyo ezingama-60. Kukho izidanga ze-BA kwizifundo ezili-17, kubandakanywa isiNgesi, imbali, ulawulo lweshishini, ifilosofi, kunye nezakwalizwi, kunye nezidanga zemfundo kunye nezenkolo.
Isikolo sifumana amabhaso ngamava: abafundi beenkonzo zoluntu bathatha inxaxheba kwiipracticums ngelixa abafundi bophuhliso lwamazwe ngamazwe begqibezela izifundo zoqeqesho phesheya kolwandle. Umthetho wakutshanje uye wahlaziya itshatha yesikolo, ngoko uTyndale uceba ukwandisa iinkqubo ezifundiswayo.
1. Zingaphi iiyunivesithi zamaKristu eziseCanada?
Kukho ngaphezu kwama-40 amaziko obuKristu asemva kwesekondari kulo lonke elaseCanada abonelela ngezidanga, iidiploma, kunye neziqinisekiso. Izikolo ziyahluka ngobukhulu ukusuka kwishumi elinesibini labafundi ukuya kumawaka ambalwa, kodwa xa zithathwa kunye zilikhaya labafundi abangaphezu kwe-17,000. Ukongeza kuzo ezi zifundo zenkolo nezakwalizwi, ezi zikolo zibonelela ngezobugcisa, isayensi, ishishini, kunye neenkqubo zangaphambi kobuchwephesha, kunye nezidanga.
2. Yeyiphi eyona yunivesithi yamaKristu ifikelelekayo eCanada?
Phakathi kweeyunivesithi zamaKristu eCanada, eyona yunivesithi yamaKristu ifikelelekayo eCanada yiCanadian Mennonite University (CMU). Nangona kunjalo, iKholeji yobuKristu yaseCanada iyafikeleleka ukufundisisa.
I-9 yeeDyunivesithi eziPhambili zoPhando eCanada ezineenkcukacha ezigcweleyo
Izikolo eziPhakamileyo ezi-10 zaDala eziDala eCanada
Iiyunivesithi eziphezulu ze-10 zamkela i-IELTS Amanqaku 6 eCanada nase-Australia
I-45 iiyunivesithi eziPhezulu eCanada yeeMasters
Blog Post Scholarships yaseCanada Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Isifundo eCanada | Ukwamkelwa | Ulwabiwo-mali | Imirhumo | Izibonelelo neMali mboleko
Post Previous:Izikolo ezili-10 eziBalaseleyo zoMthetho eYurophu
Okulandelayo Post:Izikolo ezi-2 eziPhezulu zezonyango eNew Mexico